2013-06-02 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
IN Video Editor - ON Saturday, June 08, 2013 No comments
နာမည်ဖတ်လိုက်ယုံနဲ့ တန်းသိကြမှာပါ ဇောက်ထိုးဘေးတိုက်၊ဖြစ်နေတဲ့
ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို ပြန်တည့်ဖို့အတွက် Video Rotator 1.0.9 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.. အသေးစိပ်ကိုသိလိုလျှင် http://www.videorotator.com ကို Click ပြီး မူရင်းထုတ်လုပ်တဲ့ ဆိုက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့ Serial Key ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုလိုသူများအတွက် အောက် မှာအဆင်ပြေတဲ့လင့်ယူသွားးလိုက်ပါဗျာ...
IN Burning - ON Saturday, June 08, 2013 No comments
CD/DVD အခွေတွေ ကူးရာမှာ အမြန်ဆုံးနဲ့ Copy Protect လုပ်ထားတဲ့အခွေများကို ကူးပေးနိုင်တဲ့ Software ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...PS2 လို အခွေများကိုတောင်ကူးပေးနိုင်ပြီး
iPod, PSP, Cell Phone, PVP and PDA လို Device များအတွက်ပါ လိုချင်တဲ့ Format နဲ့ရအောင် ထောက်ပံ့ပေးထားပါသေးတယ်..CD/DVD ထုတ်လုပ်ရေးသမားတို့ အကြိုက်တွေ့ကြမှာပါ....
ဒါကြောင့် စမ်းသုံးကြည့်ဖို့အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်မျာ..အဆင်ပြေပါစေ
Download>>>solidfiles (or) zippyshare (or) ge.tt
Xara Photo & Graphic Designer 9.1.1.28178 Full Version
IN Design Tools - ON Saturday, June 08, 2013 No comments
Xara Photo & Graphic Designer 9.1.1.28178 တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. တောင်းဆိုထားတဲ့ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ. ကျွန်တော်တော့ သုံးနည်း မကျွမ်းကျင်ပါဘူး.. ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ Graphic တွေကို အံ့သြလောက်အောင် ဒီဇိုင်းဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်.. Tools တွေကလည်း စုံလင်ပြီး Professional တစ်ယောက်လို ဖန်တီးနိုင်မှာပါ.
Quite simply the world’s fastest graphics software, with truly flexible illustration tools and revolutionary photo handling. A single application for all types of creative work, whether it’s vector drawings, DTP, photo composition, web graphics or Flash animation. Comes in2versions, Photo & Graphic Designer and Designer Pro, Pro offers advanced print and web design features.
– If this image was created in Photoshop with the same detail, the file would be 2000 x 3000 inches, take hundreds of megabytes of memory and file space. Asavector design it takes just 180Kbytes!
IN Converter - ON Saturday, June 08, 2013 No comments
DVD ကို Rip လုပ်ချင်သူများအတွက် DVD Ripper Platinum နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Version လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အသုံးဝင်တာကတော့ရှယ်ဗျာ အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Version ကတော့ iOSတွေကိုပါ Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။အသုံးပြုလိုသူများအောင်မှာယူသွားလိုက်ပါ
အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Serial Key ကိုပါထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။
Download>>>>solidfiles (or) zippyshare (or)uppit (or) ge.tt
WinX DVD Ripper Platinum - DVD Ripper with professional features supports all commercial DVD and remove all restrictions can be. It also provided the program allows you to convert and rip your DVD to AVI, DivX, MP4, MPEG1-2, FLV, WMV, ASF video file formats IPod, iPhone, mobile 3GP, PSP, PDA.
IObit Malware Fighter Pro 2.0.0.205 Final Full Version
IN Antivirus - ON Saturday, June 08, 2013 No comments
Malware ရှင်းလင်းပေးတဲ့နေရာမှာ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးနဲ့
အလုပ်လုပ်ပုံတော်တော်လေးကောင်းမွန်ပြီး အသွင်အပြင်လေးကလဲ လန်းပါတယ်။
malware တွေ နဲ့ spyware တွေကိုအကောင်းဆုံးရှာဖွေရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။malware တွေspyware
ရှင်းလင်းပေးတဲ့နေရာမှာလည်းကွန်ပျူတာထဲက ဆော့ဝဲလ်တွေကို မထိခိုက်အောင်ရှင်းလင်းပေးမှာ။ potential spyware,adware,trojans,keyloggers,bots,worms တို့ရဲ့ရန်ကလဲကာကွယ်ပေး မဲ့ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးမို့ တင်ပေးလိုက်ပါလိုက်ပါတယ်။
Download>>>>solidfiles (or) ge.tt (or) zippyshare
IObit Malware Fighter application was developed to be an advanced malware removal tool that will allow you to detect, remove and block unwanted applications. With the unique “Dual-Core” engine, driver-level technology and the heuristic malware detection, IObit Malware Fighter detects the most complex and deepest spyware and malware while to make sure we do not lag your PC. IObit Malware Fighter is an advanced malware & spyware removal utility that detects, removes the deepest infections, and protects your PC from various of potential spyware, adware, trojans, keyloggers, bots, worms, and hijackers. Three types of scans are available; Smart Scan will scan critical operating system files, processes and locations. The full scan scans everything and the custom scan gives the user the option to select the items that should be scanned by IObit Malware Fighter.
Improved Engine for Smart Scan, Full Scan and Custom Scan. Adopted with IObit’s unique “Dual-Core” engine and improved program core structure, IObit Malware Fighter is now available for delivering more comprehensive and deeper system scan to find the deepest infections, and finally remove or quarantine them, protecting your PC from more security threats and privacy compromises.
Brand new & easy-to-use interface. An intuitive and neat design was successfully brought to IObit Malware Fighter that provides you with four major entrances in the main interface, which lead you to the four major functions as following, “Overview”, “Scan”, “Protect” and “Cloud”. This brand new interface gives you an open-and-shut view with all the details.
Enhanced real-time protection. IObit Malware Fighter provides you with ultimate anti-malware and real-time protection, including “Startup Guard”, “Browser Guard”, “Network Guard”, “File Guard”, “Cookie Guard”, “Process Guard”, “USD Disk Guard” and “Malicious Action Guard”, which keeps your computer stay secure all the time.
Creative Cloud Computing Technology. IObit Cloud uses the latest Cloud Computing technology and Heuristic Analyzing mechanic to analyze the behavior of spyware, adware, trojans, keyloggers, bots, worms, hijackers and other security-related risks inafully automated mode.
IN Photoshop - ON Friday, June 07, 2013 No comments
ဓာတ်ပုံတွေ Editing လုပ်တာဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ...။
Download>>>solidfiles (or) fileswap(or) zippyshare (or) ge.tt
Added “Auto Crop”
Added Automatic and Manual “Dynamic Range” Correction
IN Speedup PC, Utilities - ON Friday, June 07, 2013 No comments
System လေးလံနှေးကွေးနေတယ်လို့ ပြောတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် System Speed ​​Booster 3.0.2.6 Full Version တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. System တစ်ခုလုံးမွှေနှောက်ပြီး မလိုအပ်တာတွေ ဖယ်ရှားမယ်. ပျက်နေတာတွေကို ပြန်ပြင်မယ်.. Registry ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးမယ်.. စသည်ဖြင့်ပေါ့.. System တစ်ခုလုံး မြန်ဆန်လာအောင် လုပ်ဖို့ လိုအပ်တာတွေကို ဒီကောင်က သူ့အလိုလို လုပ်ပေးသွားမှာပါ..ဖူးလုပ်အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပြီး အသုံးမပြုတတ်သေးတဲ့ သူများအတွက် Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို crack file ထဲကဟာတွေကို copy-paste နဲ့ ထည့် ၊လိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ..လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ...
IN Utilities - ON Thursday, June 06, 2013 No comments
နောက်ပြီး Theme ဒီဇိုင်းမှာလည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံလေးတွေထည့်သွင်းလို့ရတာက လည်း ဆန်းသစ် တာကြောင့်ကျေနပ်စရာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်ရင်တော့အောက်မှာယူသွားလိုက်ပါဗျာ.....
IN Recovery Software - ON Thursday, June 06, 2013 No comments
hardisk,usb pendrive နဲ့ memory card အမျိုးမျိုးထဲကပျောက်သွားတဲ့ ဖိုင်တွေကိုပြန်ရှာဖို့အတွက်
Recuva 1.47.948 လေးတွေလိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ..
Recuva (pronounced ???recover???) isafreeware Windows utility to restore files that have been accidentally deleted from your computer. This includes files emptied from the Recycle bin as well as images and other files that have been deleted by user error from digital camera memory cards or MP3 players. It will even bring back files that have been deleted by bugs, crashes and viruses! Recuva isanew file recovery tool that will unerase files that you have mistakenly deleted from your computer. It???s fast, small and will run fromaUSB drive. It also supports most digital cameras card formats, so you can restore those images you accidentally deleted! Turn off any applications you don???t need, if you are trying to recover files fromamedia card, stop using that card immediately. Ideally install Recuva before you need it, as just browsing the internet and downloading the installer createsahuge number of temporary files and any one of them could over write the file you are trying to recover. When you need it, just Scan the drive the file was on.
Changes in 1.46.919:
IN Multimedia Tools - ON Thursday, June 06, 2013 No comments
တယ်။ အခု Latest Version လေးမို့တင်ပေးလိုက်ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူက Media Player ကောင်းကောင်းကြိုက်သူတွေအတွက်ပါ။ Media File အမျိုးအစားတော်တော်များများကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပြီး Audio File တွေကို Rip လုပ်ခြင်း၊ Burn ခြင်းစတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ Internet Radio, TV တွေလည်းဖမ်းယူ နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
IN Speed up window - ON Thursday, June 06, 2013 No comments
IN Video Editor - ON Wednesday, June 05, 2013 No comments
Internet Speedကို300%ထိတင်ပေးမယ့် Modem Booster 8 Full Version
IN Speed Up Browser - ON Wednesday, June 05, 2013 No comments
download , upload နှင့် web surfing speed ကို 300%ထိမြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့
ဆိုထားပါတယ်..dial-up, DSL, ADSL နှင့် cable စတဲ့modem Internet connection
Download>>>solidfiles (or) uppit (or) zippyshare (or) fileswap
hese advantages and features Modem Booster 8
Internet Browsers တွေမှာ Login Password တွေကို ဒီလိုကြည့်မယ်...
IN နည်းလမ်းများ - ON Wednesday, June 05, 2013 No comments
ဒီနည်းလမ်းလေးက Internet Browser တစ်ခုခုကိုသုံးပြီး ဆိုဒ်တစ်ခုခုကို Login
ဝင်ရောက်တဲ့အခါ မှာ မိမိတို့ရဲ့ Password ကိုကြည့်ချင်ရင် အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်
တဲ့ နည်းလမ်းပါ။ ဒါမှမဟုတ် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေ
အတွက် အခြားပုံစံမျိုးနဲ့ အသုံးချလို့ရမယ့် နည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အရင် Windows XP မှာတုန်းကတော့ See Password ဆိုတဲ့ မှန်ဘီလူးပုံစံ Software လေး
တော့သုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။(နောက်ပိုင်း Vista,7,8 တို့မှာတော့သုံးလို့မရတော့ပါ။)
သူကို Browser ရဲ့ Password အမည်းလုံးလေးတွေအပေါ်တင်လိုက်ရင်
တွေကိုအသုံးချထားတာကြောင့် Windows 8 အပါအဝင် Windows အားလုံးမှာအသုံးပြုလို့
ရသလို Internet Browser အားလုံးမှာလည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
အခုတော့ ကျွန်တော်ကဒီနည်းလမ်းလေးကို Major Browser တွေဖြစ်တဲ့ IE, Friefox, Chrome,
Opera, Safari စတဲ့ Browser ငါးခုနဲ့ အသုံးချပြပါမယ်။
In Firefox (All Version)
အရင်ဆုံး Firefox ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
Bookmarks toolbar ပေါ်မှာ Right-Click ထောက် New Bookmark ကိုရွေးလိုက်ပါ။
Name နေရာမှာ SeePassword လို့ရေး၊ Location မှာ တော့ ကျွန်တော်အောက်မှာပေးထား
အခု Bookmarks toolbar မှာ SeePassword ဆိုတဲ့ Bookmark လေးရောက်နေတာတွေ့ရပါမယ်။
သူအလုပ် လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတာ စမ်းကြည့်ဖို့ Gmail Account ကိုဝင်ကြည့်ရအောင်..
Password နေရာမှာ ရိုက်လိုက်တဲ့ စာလုံးတွေက အမည်းလုံးလေးတွေပဲမြင်ရပြီး ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့
စာလုံး မှန်မမှန် ကြည့်ဖို့ SeePassword ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ
Password found ဆိုပြီး ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ စာလုံးတွေကိုတွေ့နိုင်ပါပြီ။
ဒါက ဘယ်ဆိုဒ်ကိုဝင်တဲ့ Password ကိုမဆိုကြည့်လို့ရတဲ့နည်းလေးပါ။
In Internet Explore (IE)
ဒီမှာလည်း အပေါ်ကနည်းလမ်းလို New Bookmark လုပ်လို့ရပါတယ်။
အရင် အပေါ်က Firefox Bookmarks toolbar မှာရှိနေတဲ့ SeePassword ဆိုတဲ့ Bookmark လေးကို
မောက်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီး Desktop ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်သက်ရာနေရာပေါ်ကို လွှတ်ချလိုက်ပါ။ (Drag and Drop
အဲဒီအခါ Internet Shortcut လေးအဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်။
အဲဒီ SeePassword Shortcut လေးကို IE ရဲ့ Fevourites bar ပေါ်ကို Drag and Drop လုပ်ပေးလိုက်ရင်
SeePassword ဆိုတာလေး Fevourites bar မှာတွေ့ရရင် ရပါပြီ..။
Login ဝင်လို့ Password ရိုက်တဲ့အခါ SeePassword လေးကိုနှိပ်ပြီး ကြည့်လို့ရပါပြီ...။
Chrome မှာလည်း အပေါ်က IE တုန်းကလိုပဲ Bookmarks bar ပေါ်ကို SeePasswrod ဆိုတာလေး
Drag and Drop လုပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါ။
Opera မှာတော့ IE, Chrome, Safari တို့လို အလွယ်တကူ Drag and Droup လုပ်လို့မရပါဘူး။
အရင်ဆုံး Menu >> Bookmarks >> Bookmarks page.. ကိုသွားပါ။
Add Bookmark မှာ Details ကိုဖြည်ချလိုက်ပါ။ Name မှာ SeePassword ကိုရေး၊ Create in မှာ
Drop down arrow လေးကို ဖြည်ချပြီး Bookmarks Toolbar ကိုရွေးပေးပါ။ Address မှာတော့
မှာအမှတ်ခြစ်ပေးပြီး Ok ပေးလိုက်ရင် Bookmarks toolbar မှာ SeePassword လေးပေါ်ပါပြီ။
ကဲ..ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့နည်းလေး ကို စမ်းကြည့်လိုက်ကြပါဗျာ...။
ဘယ်လို အသုံးချရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ဗျာ...။
အကယ်၍ Bookmark လေးလုပ်ရတာအဆင်မပြေရင် အောက်မှာအသင့်လုပ်ပြီးသား
SeePassword Bookmark လေးကိုဒေါင်းယူလိုက်ကြပါဗျာ...။
Download SeePassword bookmark>>>ge.tt (or) dropbox (or) zippyshare
IN Video Editor - ON Tuesday, June 04, 2013 No comments
idoo Video Editor Pro 1.6.0 ဟာဗီဒီယို ဖြတ်တာ ပြန်ဆက်တာစာတန်းထိုးပေးတာ
စသည်ဖြင့် MB နည်းနည်းနဲအသုံးတည့်မယ် Video Editor ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါအသုံးပြုမယ်ဆို အောက်မှာအဆင်ပြေတဲ့လင့်ကယူသွားလိုက်ပါခင်မျာ......
Download>>>solidfiles (or) dropbox (or) zippyshare (or) ge.tt
Edit videos to any video format. Join any video or audio with advanced settings, split and cut the video and audio into parts as you need (individually or in batch). It enables you to trim any part ofavideo to get the exact frame you like.
Cut/trim video and audio
Join video and video
Limitations: Not all features fully activated until purchased
• Optimized the user interface.
• Fixed some display ratio issue.
• Supported to "Video Effect"(Black and White, Old Film, Oil Painting, Fog...).
• Fixed some language issue.
• Supported to import Macromedia SWF file.
IN Windows ဆိုင်ရာ - ON Tuesday, June 04, 2013 No comments
Gmail Notifier ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲကိုတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးနည်းပါတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပိုက်ပိုက်ပေးဝယ်မှ Full Version အဖြစ် အသုံးပြုလို့ရတာရယ်
နိုင်ငံနဲ့အ၀ှမ်း အသုံးနည်းတော့ မကြားဖူးတာရယ်ကြောင့် ဖြစ်မယ်ထင်တာပါပဲ
ဒီပို့စ်မှာတော့ Gmail Notifier Pro 5.0.1 ကို ပိုက်ပိုက်မကုန်ပဲ Free သုံးနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးထားပါတယ်
ပက်ပက်စက်စက်လည်း လန်းတဲ့အကြောင်း လက်တို့ပါရစေ
ဒီဆော့ဝဲလေးကို Install လုပ်ထားလိုက်ပြီး
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ gmail တွေ Facebook mail တွေ Twitter mail တွေ .. အော် . mail အားလုံးနီးပါးထဲကို ၀င်လာတဲ့ mail အသစ်တွေကို ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဖက်အောက်ဒေါင့်လေးကနေ Noti ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲဒီလို ကိုယ့်မှာရှိသမျှအကောင့်တွေရဲ့ ၀င်လာသမျှ မေးတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ
အလွယ်တကူ နဲ့ Reply ပြန်နိုင်မယ် ...
နောက်ပြီးတခြား လန်းတဲ့အချက်တွေ အများကြီးပဲဗျ ... သုံးကြည့်မှ ကျွန်တော်ပြောတာထက်
ပိုပြီးများတဲ့ ကောင်းကွက်တွေ ရှိနေပါသေးလားလို့ လက်ခံလာပါလိမ့်မယ်
ကဲ . .စိတ်ဝင်စားရင် အရင်ဆုံး .. အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Download>>>solidfiles (or) dropbox (or) zippyshare (or) uppit
ဒေါင်းလို့ပြီးသွားရင် Full Version ဖြစ်အောင် Crack ပုံကို သေချာဖတ်ပါဦး
အရင်ဆုံး ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ထဲက GmailNotifierPro ဆိုတဲ့ exe ဖိုင်ကို Run ပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ
Install လုပ်လို့ပြီးတဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ပရိုဂရမ် Lunch မလုပ်စေပဲ ( မ Run စေပဲ ) ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ
တစ်ကယ်လို့ ဒီအဆင့်မှာမေ့သွားလို့ Run သွားရင်လည်း ပရိုဂရမ်ကို ပိတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် အောက်က ဘားတန်းထဲမှာ Gmail Notifier ရဲ့ အိုင်ကွန်လေး run နေတာကိုရှာပြီး Right Click >> Exit လုပ်ပေးပါ
( အဲဒီအိုင်ကွန်လေးက များသောအားဖြင့် အလံပုံလေးရဲ့ဘယ်ဖက်က အပေါ်မြှားဖြူဖြူလေးထဲမှာ ရှိပါတယ်)
ပြီးရင် .. ( သေသေချာချာဖတ်ပါနော် )
၁ .. gmail_not.keygen ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို Run လိုက်ပါ အောက်ကပုံအတိုင်း ပွင့်လာပါမယ်
ပွင့်လာတဲ့ထဲက Name မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နံမည်ထည့်ပါ
email မှာ အဲဒီထည့်ထားတဲ့နံမည်ကို စာလုံးအသေးနဲ့ @ ရဲ့ရှေ့မှထည့်ပေးပါ
ပြီးရင် Generate ကိုနှိပ်ပါ
ပြီးရင် Activate ကိုနှိပ်ပါ
Windows 8 မှာဆိုရင် partition C ကိုဖွင့်ပါ
ConfigData.xml ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး အောက်နားက Open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ( ၀င်းဒိုးမှာ Default အဖြစ်ထားတဲ့ Browser ရဲ့ အိုင်ကွန်ပုံလေးအဖြစ် တွေ့ရမှာပါ
%userprofiles% (ဒါကိုတော့ တွေချင်မှတွေ့မယ်)
GmailNotifierPro အဲဒီလို ဖိုဒါတွေကို အဆင့်ဆင့်ဖွင့်ဝင်သွားပြီး
ConfigData.xml ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို ကလစ်ပေးပြီး အောက်နားက Open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် Gmail Notifier ပရိုဂရမ်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ
ပွင့်လာတဲ့ Box ထဲက ဘယ်ဖက်အောက်ဆုံးဒေါင့်နားမှာ Registered ဆိုတဲ့စာလုံးကိုတွေ့ရင် Full Version ဖြစ်သွားပါပြီ
အဲဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ရင်လည်း စိတ်မညစ်ပါနဲ့ အဲဒီဆော့ဝဲကို Uninstall လုပ်ပြီး C ထဲမှာရှိနေသမျှ Gmail Notifier နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဖိုဒါတွေ ဖိုင်တွေ အားလုံးကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် Install ပြန်လုပ်ပါ ..
ပြန်ပြီး Crack ပါ ..
သေချာပေါက် Full Version ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်
ကဲ .. Full Version ဖြစ်သွားပြီပေါ့ ..
ဒီဆော့ဝဲကို မသုံးခင် အရင်ဆုံး ဒီဆော့ဝဲနဲ့ ချိတ်ဆက်မယ့် gmail တွေကို လိုက်ပြင်ရအောင်
ကိုယ်ချိတ်ဆက်မယ့် gmail အကောင့်ကို Sing in ၀င်ပါ
ပြီးရင် Settings ကိုနှိပ်ပါ
ပွင့်လာတဲ့ထဲကနေ Mail Settings ကိုနှိပ်ပါ
ပွင့်လာတဲ့ထဲက Forwarding and POP/IMAP
ပွင့်လာတဲ့ထဲက Enable IMAP ရဲ့ရှေ့မှာ အမှတ်တပ်ပေးပြီး အောက်ဆုံးက Save Changes ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် အဲဒီအကောင့်ကို Sign Out ပြန်ထွက်ပါ
ပြီးရင် Gmail Notifier ဆော့ဝဲကို Run ပါ
ပွင့်လာတဲ့ Box ထဲက Manage accounts ကိုနှိပ်ပါ
ပွင့်လာတဲ့ထဲက Add ကိုနှိပ်ပါ
ပွင့်လာတဲ့ထဲက Google Gmail IMAP ကိုနှိပ်ပါ
ပွင့်လာတဲ့ထဲက Description အကွက်မှာ ကိုယ်သတ်မှတ်ချင်တဲ့နံမည်ကို ထည့်ပါ
Email Address အကွက်မှာ ကိုယ့်ချိတ်ဆက်မယ့် အကောင့်ရဲက email ကိုထည့်ပါ
password အကွက်မှာ အဲဒီအကောင့်ရဲ့ password ကိုထည့်ပါ
ပြီးရင် Ok ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
ဒါဆိုရင် အကောင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်ခြင်း ပြီးသွားပါပြီ ..
တခြားနောက်ထပ် အကောင့်တွေကိုလည်း ဒီလိုပဲ အဆင့်ဆင့် ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ
ကဲ .. ပြီးရင် gmail notifier မှာ ဇော်ဂျီဖောင့် မြင်ရအောင်
Mail ကိုနှိပ်ပြီး ပွင့်လာတဲ့ ဘယ်ဖက်အခြမ်းထဲက Custom font ရှေ့မှာအမှတ်တပ်
ပြီးရင် Zawgyi One ကိုရွေး
အောက်ဆုံးက Ok ကိုနှိပ် ...
ဒါဆိုရင် .. အဆင်ပြေသွားပြီ
But, it is Ok in Windows 8 ( tested by me).
You can download the program included keygen below link.
Be Enjoy! :)
IN နည်းလမ်းများ - ON Tuesday, June 04, 2013 No comments
အင်တာနက်သုံးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ စိတ်အ၀င်စားဆုံးကိစ္စတွေထဲမှာ အင်တာနက် Download Speed ကို ဘယ်လိုမြှင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ တစ်ခုအပါအ၀င်ပေါ့ ..
ဒါပေမယ့် .. အဲဒီလိုလူတွေထဲမှာမှ ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ ဖိုင်လေးတွေကို သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဝေပေးချင်သူတွေနဲ့ Blogger တွေအဖို့ Upload Speed မြင့်ဖို့ကလည်း တော်တော်အရေးပါတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ...
ဒီတော့ .. ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ဒေသမှာနေနေရတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့ ရှာရင်းဖွေရင်း ကလိရင်းနဲ့ အမှန်တကယ် ထရောက်တဲ့ နည်းလေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ် ..
ဖိုင်တွေကို Hosting Site တွေမှာ တင်တဲ့အခါ Upload Speed ကို သိသိသာသာမြှင့်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလေးတစ်ခုပါ ..
ကဲ .. အဆင့်နှစ်ဆင့်လုပ်ရမယ့်ထဲက ပထမအဆင့်ကို စပါမယ် ..
၀င်းဒိုးကြီးရဲ့ Run Box မှာ gpedit.msc လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ် ဒါမှမဟုတ်လည်း Ok နှိပ်ပါ
အဲဒီထဲက Administrative Templates ရဲကရှေ့က မြှားအဖြူလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ
အဲဒီထဲက Network ရဲ့ရှေ့က မြှားအဖြူလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ အောက်ကပုံအတိုင်း
အဲဒီထဲက Qos packet Schedule ပေါ်မှာနှိပ်ပြီး ဘယ်ဖက်ထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့ထဲက Limit reservable bandwidth ပေါ်မှာ Double Click နှိပ်လိုက်ပါ အောက်ကပုံအတိုင်း ၀င်းဒိုးအသစ်တစ်ခု ပွင့်လာပါမယ်
အဲဒီထဲက enable ရဲ့ရှေ့မှာ အမှတ်တပ်ပေးပါ
အောက်မှာရှိနေတဲ့ကိန်းတွေကို ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်နေပါစေ0( သုည ) ပြောင်းလိုက်ပါ
ပြီးရင် Ok ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ..
ဒီအဆင့်ပြီးတာနဲ့ စက်ကို Restart ချလိုက်ပါ
ဒုတိယအဆင့်ကို မစတင်ခင်မှာ အင်တာနက်လိုင်းကို အရင်ဆုံးချိတ်လိုက်ပါ
ဖုန်းနဲ့ဆိုလည်းဖုန်းနဲ့ ... Wifi နဲ့ဆိုလည်း Wifi နဲ့ပေါ့ ..
အဲဒီလို အင်တာနက်လိုင်း ချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Control Panel ကို သွားပြီး
Device Manager ကိုဖွင့်ပါ
အဲဒီထဲက Ports ( COM & LPT ) ရဲကရှေ့က မြှားအဖြူလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ
အဲဒီထဲမှာ COM 1, COM2 ... စသည်ဖြင့် တွေ့ပါလိမ့်မယ် .. ( အင်တာနက်လိုင်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး အရေအတွက် မတူပါဘူး )
အဲဒီထဲက တစ်ခုချင်းပေါ်မှာ Double Click နှိပ်လိုက်ရင် ၀င်းဒိုးတစ်ခု ပွင့်လာပါမယ် ..
ပွင့်လာတဲ့ ၀င်းဒိုးထဲက Port Settings ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး Bits per second အကွက်မှာ 128000 ကိုပြောင်းပေးပါ
Flow control အကွက်မှာ none ကနေ Hardware ကို ပြောင်းပေးပါ
ပြီးရင် Ok ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
နောက်ထပ် COM2... အဲဒီလို တွေကိုလည်း အပေါ်ကအတိုင်း ပြင်ပေးသွားလိုက်ပါ
အားလုံးအတွက် ပြင်ပေးပြီးသွားရင်တော့ စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ
၀င်းဒိုးပြန်တက်လာတဲ့အခါ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပြီး ဖိုင်တစ်ဖိုင်လောက် Upload တင်ကြည့်လိုက်ပါ
တကယ်ပဲ Upload Speed ဟာ သိသိသာသာမြင့်တက်လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ကဲ .. အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ